Waizviziva ... Trisquel? | Kubva kuLinux
Maxwell | | Kugoverwa, GNU / Linux
Isu tinotanga nenhoroondo diki:
Kana isu tichitaura nezve 100% yemahara software, isu tinowanzo kurondedzera izvo nekukurumidza Richard Stallman, baba veiyo GNU chirongwa uye uzivi hwemahara software. Sezvauchaona, iye aivewo nebasa mukugovera uku. Pamberi pekuvapo kwekuparadzirwa kwemahara Stallman aive asina chokwadi kuti ndedzipi nzira dzekugovera dzinokurudzira, nekuti vese vaive nesoftware yekudyara, panguva iyoyo aishandisa Debian. Kusvikira kuvapo kweUtuto, mashoma ekugovera anofungidzirwa kuumbwa chete nesoftware yemahara...
Trisquel GNU / Linux akatanga nzira yake mu Universidad de Vigo Ikoko kuSpain iri kure, panguva iyoyo kwakavakirwa paDebian, yakaunzwa zviri pamutemo kuPolytechnic Kuvaka kweOrense Campus mu2005, nekuvapo kwaStallman semuenzi, yakapa hurukuro yekunzwa kuneavo vaive vadzidzi vesainzi yemakomputa. Simuka se kudiwa kwekugadzira yemahara OS uye neGalician.
Trisquel inotungamirwa kuve 100% yemahara inoshanda sisitimu iri nyore kushandisa kumushandisi wemumba, ndizvo zvichibva paUbuntu kubva muchinyorwa 2.0; uye zvisinei neizvi ine yako pachako zvinyorwa uye dhatabhesi repakeji (senge Debian mapakeji) Chiratidzo chayo chiratidzo cheCelt che triskelion, kunyange muchokwadi ichi chiri matatu maDebian spirals akabatana pakati, mutero mudiki kune chirongwa cheDebian nebasa ravo. Parizvino mutungamiri uye mushambadzi mukuru ndiye Ruben Rodriguez.
Yayo default desktop ndeGnome, kunyange iine zvakare vhezheni neLXDE (Trisquel Mini) ichiri mukuvandudza. KDE, Xfce uye nevanozivikanwa windows mamaneja zvakare anokwanisa kuiswa kuburikidza nechengetedzo, kana yakachena kuisa kubva kuma disks netinstall.
Ichowo, ine shanduro ina dzakasiyana:
Trisquel: iyo huru vhezheni, yakanakira mushandisi wakajairika; nyore kushandisa uye kuisa.
Trisquel Edu: iyo inoitirwa kushandiswa munzvimbo dzekudzidzisa, inoonekwa padhuze neLTS. Inosanganisira mapakeji edzidzo uye yekirasi manejimendi system.
Trisquel Pro- Yakagadzirirwa bhizinesi, accounting, manejimendi, grafiki dhizaini uye hofisi mapakeji. Kunge Edu vhezheni, inongowanikwa muLTS.
Trisquel Mini: iyo yakajeka vhezheni yeTrisquel. Iyo ine LXDE nekumisikidza uye nezvimwe zvisina kurema kunyorera, zvakagadzirirwa kushandiswa pamabhuku uye makomputa ane mashoma zviwanikwa.
Kuve wakavakirwa paUbuntu kunogara nyore kwayo kwekumisikidza, mapakeji, uye kugadzikana. Inoita kushandisa yemahara linux kernel, iyo isina proprietary firmware binary blobs. Nekuda kwehuzivi hwayo, hapana software yekudyara kana madhiraivha anoshandiswa, uye mumusangano wayo hapana hardware yemidziyo inotsigirwa uye hazvisi-zvemahara zvikumbiro zvinokurudzirwa.
SaDebian, zvakare ine musiyano webrowser yeFirefox sezvo isingafungidzirwe kuti inokurudzirwa: Abrowser.
Kunyangwe iine vashoma vashanduri, ine nharaunda iri kukura yevashandisi, uye ndiyo imwe yezvikamu zvishoma izvo FSF uye chirongwa cheGNU chinokurudzira shandisa.
Iyo ine akati wandei masisitimu ekutsigira ekuchengetedza kwekugovera, senge mipiro yekuzvidira kuburikidza nePaypal, sisitimu yekubatana, uye a chitoro chezvipo nezvinyorwa zvakasiyana siyana zvine chekuita naTrisquel.
Icho chiitiko neTrisquel chakafananidzwa nechero kugovera uye chakavhurika kune akasiyana mikana zvichienderana nerudzi rwekushandisa iwe rwaunopa iwe. Asi kana wakadaro Hardware haina kutsigirwa neyemahara kernel Ini ndinofunga haina kukurudzirwa iwe. Uye hazvibvumire iwe kuisa ekushambadzira ekunyorera, kana kuvatsigira.
Kunyangwe, kana iko kushandiswa kwezuva nezuva kwemakomputa chishandiso chemuhofisi, kuita mabasa, dhizaini kana chirongwa; Trisquel inogona kusangana zvaunoda zvakakwana.
Semuenzaniso, mune yangu kesi ini ndinongoshandisa komputa kuita mashoma mabasa, akanyorwa muAbhiword, tsamba, kutamba kukambaira paRoxterm, uye kuteerera kune imwe mimhanzi. Ini ndinoshandisa Midori seye browser, ad blocker uye Gnash inoshanda mushe pakushandisa kwangu network. Ini handidi kuve neazvino maapplication, kana nyowani, ndosaka ndichishandisa iyo LTS vhezheni.
Asi chiitiko chega chega chakasiyana, uye mukushandisa kwangu pachezvangu ndizvo zvandinongoda chete. Zvimwe zvimwe inzwa "kushomeka" kana kushushikana zvishoma kuti haugone kuwana mamwe madhizaini kuti ashande pairi.
Horaiti vakomana, uye neizvi zvinopedzisa ongororo pfupi iyi, ndinovimba kuti dai musina kuzviziva izvi zvinogona kukubatsira kubvisa kusahadzika kwako. Uye kana iwe waive uchimuziva kare, usazeze edza, Ndinokuvimbisa kuti hauzodemba.
Tinoverenga gare gare, kwaziso kune vese.
Peji yepamutemo: http://trisquel.info/es
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Waizviziva ... Trisquel?
Kuve wakavakirwa paUbuntu kunogara nyore kwayo kwekumisikidza, mapakeji, uye kugadzikana
Hahaha zvino sezvo ini ndichigara nhaka zvakashata tinoenda.
Ubuntu iwe unofunga tsiga?
Pindura kuna ldd
Dzimwe nguva ndinofunga kuti Canonical yakupa iwe kushambadza. Ini ndakavakirwa pa "'zvirinani kuti vataure nezve imwe, kunyangwe yakaipa." Iwe unosimudzira Ubuntu zvakanyanya sezvaunogona. Nemashoko ako unokurudzira kuda kuziva kweavo vasingazvizive uye kukurudzira iwo ubunteros kuti varambe vachidzivirira kugoverwa kwayo ... ivo vanokubhadhara zvechokwadi 😛.
Zvakanaka, cherekedza izvo zvandiri kutsvaga zvakapesana, kuti iyo distro haina kushandiswa
Ehe, hongu ... ndizvo zvaunonyora asi zviito zvako zvinoratidza chimwe chinhu XD.
Haha zvakanaka kubva zvino ndichataura kuti ma distros andinoda ndiwo shit kuti vashandise.
Uye hazvisi nani here kuti ungorega kutaura? 😛
Fuck Annubis, nguva dzose zvakafanana newe murume
Zvakanaka, zvinoita kunge zvakagadzikana kwandiri, ndiko kugovera uko kwakanyatsoenderana nemakomputa angu; Ini ndinotoshinga kutaura kuti yakandishandira zvirinani pane Debian pachayo.
Nyaya yekuravira, kana ikaratidzika kunge isingaite kwauri, ndinoiremekedza. Uye neruremekedzo rwese rwakakodzera Ushingi, ini handisi kuzobvumidza iwo mafungiro akadaro kubva kwauri.
Pindura kuna Maxwell
Ndinofanira kunge ndataura chimwe chinhu chakakomba.
Icho chinhu chimwe kutaura kuti "Ubuntu haina kugadzikana", zvinova ndizvo zvandakataura, uye zvakanyanyisa kutaura kuti "Ubuntu ndiko kurara", izvo zvandisina kutaura.
Tarisa, ini handizive mamiriro ako kana chero chinhu chakadai uye ndinonyatso kuremekedza mafungiro ako. Asi kana iwe uchizonyora chimwe chinhu chemuganhu, ini ndinokumbira iwe ndapota usanyora kana "izvo" mumaposvo angu.
Zvirinani ndinyarare nekuti handinzwe kuda kuita nharo.
Kana iwe uri wakashata mupendero, handei
Ndakaziva Trisquel kubvira payakapihwa (nekuda kwekuswedera kwechiitiko ichi) uye kunyangwe ichiratidzika senge kugoverwa kwakanakisa (chimwe chezvakanakisa mukati meuzivi hwayo) handikwanise kuchishandisa nekuti munguva dzino matongerwo enyika anokuganhurira zvakanyanya.
Zvino, vese avo vanoti vanobvumirana 100% naStallman vanofanirwa kushandisa izvi kana zvakafanana. Asi kune hunyengeri hwakawanda kunze uko. Ndiri pachena kuti proprietary software inodikanwa (panguva ino) uye kungozivikanwa kweGNU / Linux ndiko kunogona kubvisa izvo zvinodiwa.
Zvakanaka, ndinofunga hazvidi sekuda kwavo sezvavanoda kuti titende.
Chii chingaitika kana vese vashandisi vanorwira "hondo tsvene" uye vachirarama vachipokana nemahara mahara, rimwe zuva, rimwe chete, vakashanda senzanga yavari?
Zvirokwazvo nyika yaizove nzvimbo iri nani. Kune rimwe divi, kana uchishandisa software yekudyara, chinhu chete chinoitwa kuenderera mberi zvichienderana navo, vape simba; Uye izvo hazviite kuti ndiseke zvachose. Unyengeri, pamwe; Asi kana isu tisinga "isa mabhatiri" sezvavanotaura munyika yangu, zvino riini?
Vagadziri vezvigadzirwa vanongofunga nezve izvi: ($) _ ($). Hazvina mhosva kuti nharaunda yakabatana zvakadii, icho chakakosha huwandu hwevashandisi. Kuti tiwane mukurumbira tinoda software yekudyara (sevatyairi) Tinofanira kuzvishandisa nechinangwa chekukwezva vanhuwo zvavo (kwete kuzvidza). Nenheyo yakanaka ye "vatengi" isu taigona kusundira yemahara hardware kuti iitwe kana zvirinani kuvandudza varidzi vezvidzi
Imwe nzira (iyo Chango inoita kunge inoratidza) ndeyekukudziridza zvikwata zvine yemahara Hardware uye netariro kuti vachabudirira. Saka isu tinosvetuka kudiwa kwevatongi vanezvivakwa.
Chero chero chimiro, chinangwa cheFSF kushandura nzanga kuti ive yakasununguka. Ndinodzokorora, SOCIETY. Kuti nharaunda iungane zvakanyanya, kubatirira kumusana, kushoropodza vekunze,… neizvozvo isu tinokwanisa kuchengetedza denderedzwa rakavharwa rinozove rakadzika midzi uye rinopa kumukira kwenyonganiso isingashandise chero chinangwa.
Sezvaunotaura, izvo zvinokoshesesa kwavari imari. Chii chaunowana kuti iwe une vashandisi vazhinji asi kuti pakupedzisira munhu wese achafunga kuti muridzi "anodikanwa" kuti akwanise kushandisa sisitimu? Hazvina basa, nekuti kuva vashandisi vazhinji vangatoreva kuti vaive nevatengi vazhinji, vaidya izvo zvavakapihwa; Izvo hazvina basa chinhu kuti kune akawanda sezvo zvisina kukodzera kana paine vashoma vashandisi uye "nyanzvi" vanoto sarudza zvakavanzika zvinhu uye vanozviona se "zvakafanira."
Ndosaka chakakosha iri pfungwa, kana vanhu vachiziva kukosha kweSoftware Kuva Mahara, shanduko yavo kuFree System ichave otomatiki uye kana pasina rutsigiro rwemahara havazotenge iyo Hardware uye iwo mutauro unonzwisiswa nevagadziri.
Pachave pasina shanduko kudzamara vanhu (vakawanda kana vashoma) vataura "Handisi kuzokutengera kusvika wandipa ndirikuda", asi kana zvavachataura «Ok ndinofunga isu tiri boka hombe izvozvi, urikuenda kunochinja zvavakatipa pane izvo zvatinoda, ndapota? Kana kuti tinoenda kunotsvaga vanhu vazhinji? ».
Ini ndanga ndichizotaura chimwe chinhu asi iwe watozvitaura zvese.
Kuenderera mberi nekushandisa izvi software ndizvo zvinoita kuti zvive "zvakakosha" uye izvo zvinongovapa simba. Zvino, vanotarisira sei kuti chishamiso chizoitika kuti vazova Mahara (kana kuti Mahara kufambira mberi)?
"Kuzivikanwa" kweGNU / Linux hakuite chinhu, kungoshandisa "Linux" hakuna kukwana.
Handizive zvaaireva nezve hunyengeri, hongu zviripo, asi isa nenzira iyoyo mundima iyi zvinoita sekunge aitaura nezveumwe (kwete uya wandinoziva).
Trisquel idombo rakasimba, uye rinoona huwandu hwakawanda hwehardware, chero bedzi uine madhiraivhi emahara. Zvino, ini ndinosarudza kushandiswa kweSalixOS (yakavakirwa pane slackware), nekuda kwezvikonzero zvekuravira, iniwo handione zvakaipa kuti kernel ine mablobs, chero bedzi vasingatumire ruzivo rwevanhu, kana kuita zvinhu zvakasviba (ini ndinogara ndichitevedzera iyo nhau iyo Ivo vanotaura nezve Bios kana Hardware iyo inotyora chengetedzo, yakapusa paranoia, zano rerangano, kana kurudyi?). Chaizvoizvo, iyo huru hondo yemakore mashoma anotevera ndeye Mahara Hardware: kunyangwe iwe ukashandisa zvakadii zana% software yemahara, iyo yemuviri chikamu ichiri yakasarudzika ... Ndosaka ndichifunga kuti avo vedu vanoshandisa Linux vanozviitira zvinhu. izvo zvinopfuura kutonga chikamu se "wakasununguka kana kwete wakasununguka." Ndati.
Zvinenge zvakanaka kubva paDebian uye kwete Ubuntu. Kushandisa imwe yakavakirwa pane (kunze kwamai) ini ndoda kushandisa iyo yakavakirwa paUbuntu.
Zvakanaka, iwe une Venenux, 100% yemahara distro ne KDE uye yakavakirwa paDebian. Ini handikurudzire kushandisa Ubuntu nekuti iine proprietary software, asi ndinoremekedza zvaunofarira.
Venenux haina kumira zvishoma?
Kwete chaizvo. Iye mupenyu zvirinani.
chinyorwa chakanaka kwazvo .. asi iwe unogona kupi kurodha pasi .. kuita imwe bvunzo?
Pindura kuna anubis_linux
Unogona kudhawunirodha kubva kune yepamutemo peji
Kunyangwe ini ndaikurudzira kumirira Brigantia, iyo ichaburitswa mumazuva mashoma.
Ini ndinogovana ideology ye100% yemahara software uye ndinofunga kuti kana mumwe munhu achifarira kushandisa yemahara software, ivo vanofanira kutanga vatarisa: http://www.h-node.org/hardware/catalogue/es kuti uone kuti ndeipi Hardware inowirirana zvirinani ne100% yemahara distro.
Ndakazviedza kwemwaka uye zviri kufamba zvakanaka. Kukurumidza uye kupenya. Izvo hazvina kutaurwa kuti chimwe chehunhu hwacho kutakura kernel munguva chaiyo. Zvakare, zvinoita sekunge iyo yemahara kernel, sezvo isina madhiri edhisheni, yakareruka zvikuru. Mukutanga kumhanya kunongo fananidzwa ne archlinux.
Kana iri yekuisa software yepamutemo, ini ndaive ndisina matambudziko ne flashplayer (ini handirangariri chaizvo kana ndikaiisa ine repostory). Ini ndinofunga dambudziko hombe rinouya nemakadhi ewifi asingatsigirwe pamwe nemifananidzo.
Ini ndinoshandisa Trisquel kune nyaya yemisimboti (zvematongerwo enyika, ideology, kurangana, chero chaunoda kuitumidza) uye chokwadi ndechekuti yakanyatsogadzikana. Kune rimwe divi, ini handigone kutaura zvakafanana kuUbuntu uye sezvo ini ndisina chokwadi chaizvo zvazvinoreva kuti imwe distro kuve yakavakirwa pane imwe, ndinofungidzira kuti Ubuntu bugs chikamu che "mushandisi ruzivo", pamwe ku ita kuti zvive nyore shanduko kune vanhu veWindous kana chii chandinoziva.
Icho chokwadi ndechekuti ini handina kumbove nematambudziko kubvira pandakaiisa, inenge mwedzi mitatu yapfuura, uye chinhu chega chandakamira kushandisa (ndisati ndashandisa Debian) ndiyo Adobe Flash player, iyo ichiri kuyamwa, mutyairi weNvidia mifananidzo (crap) uye isina-emahara multimedia codecs, ayo asingadiwe muTrisquel.
Ndine rombo rakanaka kuti ini ndakanga ndisina rusaruro ndisati ndambozviedza.
Pindura kuna Spiff
Zvakanaka, zvinoenderana neUbuntu zvinoreva (pakati pezvimwe zvinhu) kuti vanoshandisa iwo mapakeji akafanana ari muzvitoro zveSouth Africa distro. Kunyangwe ini ndisingazive mashandiro eTrisquel, kana marekodhi aanoshandisa. Kana usina kumbobvira uine matambudziko neiyi distro, ini ndinogona kungokuudza chete: Makorokoto!
Ini ndinongova nemubvunzo .. Iyo browser yaunoshandisa ABrowse r, ndingaiwana kupi? Chii chakavakirwa?
Musiyano weFirefox browser (Maxwell anoisa mune yake posvo).
Ndiri kusekerera kuti anozvidza mutyairi ane kodzero weNvidia uye mafomati epfuma. Ini ndinovada (uye ndine wifi futi).
Trisquel ine yayo ekuchengetera, kurongedza kwayo kwakavakirwa paUbuntu, chete pasina isiri-yemahara software. Kana iwe uchida kushandisa Abrowser unogona kuitsvaga pano:
Kwete murume, hazvisi zvekuti ndinonzwa kuda kuishandisa, ndezvekuti ini handina chandinoziva nezvazvo. Unogona kundipa rumwe ruzivo? Ini handina mukana weiyo saiti ¬¬
Ah, ndinofunga ndinorangarira nguva yadarika ndichitsvaga zvinyorwa, ini ndanga ndichiverenga pane peji reDebian nezve blockade yeCuba. Ndine urombo, ndakanganwa nyaya iyoyo.
Ini ndakaisa rondedzero seyatsvaga package.
ABrowser ndeye isina kuvhurwa vhezheni yeakakurumbira Firefox webhu bhurawuza. Iyo yakanyorwa mumutauro weXUL uye yakagadzirirwa kuve isingaremi uye muchinjikwa-chikuva.
Iyi metapackage yakanangana neazvino abrowser package mune yako kugovera. Ndokumbira kuti usabvisa icho kana iwe uchida kungo gamuchira zvakakosha zviwedzero zveiyi package mune ramangwana.
Muchidimbu, ABrowser ndizvo izvo Iceweasel iri kunaDebian. Bhurawuza risingazivikanwe rakavakirwa paFirefox, kunyangwe iwe uchigona zvakare kuisa GNU Icecat, yanga yave yakafanana.
Ini pachangu, handishandise nekuti zvinoita kunge zvinorema kwandiri, uye sezvandinotaura, kushomeka kuderera kwainako, kuri nani. Ndosaka ndichishandisa Midori.
Kwaziwai uye regererai ndangariro yangu xD
Iyo Abrowser, forogo yeMozilla Firefox (yakafanana neIceweasel uye IceCat). Zvinotaridza kwandiri kuti haina kunyorwa zvakanaka kana chimwewo chinhu uye chinoenderana neyako yekutsvaga. Handizive kuti zvinoshanda sei.
Damn, inini ndega ndisingafarire kugoverwa kwakatorwa. Unoda kugoverwa mahara? Unoshandisa debian uye pakupera kwenzvimbo isa "mahara". Uye ndizvozvo, makorokoto Richad Stallman nezvese! Debian anga aine "social contract" kweanenge makore gumi nemashanu uye anoizadzisa. http://www.debian.org/social_contract.es.html
Yakanga isina kuoma zvakadaro! Ma que trisquell ni gsence kana chero zvarinodaidzwa.
MuDebian vanotsigira yavo software uye Stallman haadi izvozvo. Asi hesi, ikozvino zvandiri kufunga nezvazvo, ndiani ane mahara bios pakombuta yavo? Tese tinoshurikidzwa.
Richard anazvo pane yake Lemote Yeelong. Iyo chete komputa ine Mahara BIOS
Ehe, Stallman anogara achitungamira nemuenzaniso. Pane mumwe munhu ane YeeLoong 8101B?
Ini handizive. Uye zvakare, inofanirwa kurairwa kubva kumugadziri.
Debian haina kusununguka zvakakwana, uye inopesana nechibvumirano chayo chezvemagariro, inotsigira zvigadzirwa zvemidziyo uye ine zvivakwa zvekuisa isiri-yemahara software. Iyo Trisquel chirongwa chakanangidzirwa pane imwe mhando yemushandisi kupfuura iyo Debian yaizoshandisa.
Izvo zvinogadzira yemahara kumisikidza, asi iyo distro inoenderera ichigovera isina-yemahara software.
Ini ndinonyorera kune zvakataurwa naAaron pane h-node saiti. Iyo distros inokurudzirwa neFSF (senge trisquel) ndeyevanhu vanofarira kuvaka komputa yavo. Asi kune uya anokakavara mu linux, zvinogona kunetsa
Ndiregerere kana iwe uchifunga kuti ndiri kuita "kuzvitaurira."
Ndakaverenga iyo yekupinda muzuva rayo (yakanaka kwazvo) uye ndinokunzwisisa zvakakwana. Asi ngatisimbisei kuti muTrisquel foramu ivo vanoedza kuenderana, sezvaunonyora, maitiro avo ane musoro.
Kana iri h-node saiti, ini handikwanise kuwana iwo mamaboard (kana mamaboards) aripi?
Iyo haina matikiti. Iyi ndiyo yepedyo.
Ini ndinoshandisa debian main, iyo yanga yakafanana, 100% yemahara
Ini ndichagara ndichinetseka kuti sei vasingazoise yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti pavanotaura nezve chimwe chinhu, kushambadza, kana zvaitwa, unofanirwa kuzviita zvakanaka xD
Ndiri kufarira kwazvo chirongwa chakatsanangurwa asi zvinosuruvarisa kuti handikwanise kuiisa pakombuta yangu nekuda kwemhirizhonga yemahara, ini ndagara ndiri fan weNVIDIA GPUs asi nechitarisiko cheOptimus tekinoroji inondisiya ndiri kunze kwemutambo nema distros seizvi, ndatenda nedata zvakadaro, kwaziso.
Trisquel kubwinya. Ini ndinofungidzira kuti kana ikasaziva imwe Hardware inogona kunge ichigumbura, asi ndakaiisa pamachina mazhinji uye haina kumbobvira yaitika kwandiri, kubva kuGPU kuenda kuprinta, zvese zvinomhanyisa automagically uye pasina matambudziko.
Binary blobs haigone kudzorwa, senge zvese zvinhu zvebhinari, munhu anogona chete kuve 'nekuvimba' mune anozvipa. Kunyangwe pasina kufunga nezve kusuwa kwehunhu hwepropathiary software, maererano nechengetedzo zvinongogadzikana.
Kubva pane zvakaitika kwandiri: Ini ndinokurudzira kuyedza Trisquel uyezve kutaura. Izvo hazvina kundipa chero chinhu kunze kwekugutsikana, zvese zvine hunhu uye hunyanzvi.
Rarama kwenguva refu Yemahara Tsika!
Trisquel inosveta zvinhu zvakawanda hazvishande zvakafanana nekuve nemotokari yemapuranga nekufamba kwemazuva ano uye zvinongogoneka kuwana mashoma mashandiro kubva kumakomputa chiCommunism chema distros, rusununguko rwune kugona kugona uye kana imwe distro ichida trisquel inongobvumidza iwe kuti ushande ne "yemahara" software, ingori imwe TOTALITARY system senge Windows.
Mhoroi vanhu vese! Ichokwadi ndechekuti ini ndakagutsikana kwazvo neshanduko yandakaita nekuenda kuTrisquel, iyo panguva ino iri kuenda kune vhezheni 6 nerutsigiro rwakafara kwemakore mashanu. Ndisati ndashandisa ubuntu, asi ini ndanga ndakwanisa kuziva mune bhaibheri (semuenzaniso, bhuku raStallman pamusoro pekuti nei software ichifanira kunge iri yemahara) uye neyakareruka kushandisa 100% yemahara software, uye ndinofunga kuti haisi chete hunhu hunobatsira, asi zvakare mushandisi danho.
Ini ndinonzwisisa kuti vamwe vanhu vanogona kusawirirana uye zvinonzwisisika, asi kwandiri zvakandishandira zvinoshamisa.
Iwo mafambiro ekuparadzaniswa kweLinux, ayo anosanganisira software yekudyara, zvinoita kwandiri kuti kune imwe nhanho zvinogona kutaurwa, zvichipesana nezvinorehwa nesoftware yemahara, pasina mabhururu ari musimboti yesystem, kana mabhaari ekushambadzira, ayo semumwe mushandisi akataura Pamusoro ndiani asingarangariri zita rake panguva ino, iyo flash plugin haina kungoshomeka chete, uye yave kuda kushaya basa, asi zvakare inotumira dhata anoziva kupi. Tekinoroji chishandiso uye yemahara software inokupa iwe mukana wekuti uve nekutonga kwemuchina uye kwete imwe nzira yakatenderedza, sezvinoita proprietary software, uye nekuremekedza izvi pane zvido zvinomanikidzwa kuenderera zvichienderana nesoftware iyi munyika yekomputa sainzi nhasi.
(Kana ukasachengeta Flash, muto wemutemo)
Pamusoro paTrisquel, ndinogona chete kutaura zvishamiso. Ndiri novice mune izvi, handina kana mwedzi mitanhatu ndichishandisa Linux distros, uye kunze kwekuda kuziva, ndaida kuyedza Trisquel (6), uye zvese zvakashanda zvakanakisa: resolution, kurira, WIFI !!!! ... Ini handisi fan we AMD, ini ndinoda Intel uye ndinofunga yakashandura 6.0% ne laptop yangu…. Zvinongonditsamwisa zvishoma, dzimwe nzvimbo dzandinoshanyira uye dzinoshandisa kupenya, uye izvo zvaive zvisiri muTrisquel, ndakatsvaga zvese ... mwenje wemagetsi, greasemonkey, nezvimwe ...
Ndakaisiira Opensuse 12.3, nekuti zvinoita kwandiri kuti handina kugadzirira, kutora kuzvipira kwetsika, kuti vanhu vanoshandisa iyo distro vafungidzira, kunyangwe zvakadaro kuombera, kuedza kwavo, uye kana danho iro, pakupedzisira , Ndine yakajeka, ndeipi distro yandiri kuenda kusarudza….
Pindura kuna Igniz-X
Mhoroi, pamwe vanganditsoropodza, asi kuve nePC yausingazokwanise kuisa mapurogiramu aunofarira nekuda kwekutevera yazvino software hakunyanyobatsira.
Ini ndinonzwisisa kuti Windows inoedza "kushandisa" mushandisi, kutumira ruzivo kune vechitatu mapato, uye inomiririra chipingamupinyi sezvo isiri yemahara software, asi nechero rezinesi. Asi MAPROGRAM ANOSHANDA muWindows (mazhinji akasununguka) ndiwo anoita kuti zvive zvinobatsira. Ndiwo mapurogiramu.
Ok Trisquel ndeye mahara, uye yakagadzikana kwazvo. Asi hazvibatsire kuiisa, nekuti haitsigire mp3 kana mafomu ane proprietary, asi ayo anoshanda chaizvo
Ini handizive kuti nei vamwe vavandudziri vachiona "proprietary" zvirongwa zvakashata. Kune mapurogiramu ekuchengetedza ayo akanaka kwazvo, uye asingatumire ruzivo rusina mvumo kune vechitatu mapato
Ini handidi kuisa trisquel pane yangu pc. Ndine kadhi yemifananidzo, ndakaitenga kuti ndiishandise. Kwete kupererwa nevatyairi.
Parizvino, ndinoshandisa Windows 10, ichiperekedzwa neBURG padivi peUbuntu. Ini ndakagadzirisa iyo yekupedzisira kuti isatumire ruzivo kuamazon pamusoro pekutsvaga kwangu mukubatana.
PC inofanira kubatsira, kuitira kuti ienderane nesu, kwete kuti isu tienderane nayo.
Chero ipi akadaro
Iyo yakanaka, kwandiri, ndeye kushandisa Miswe pane USB. Zvese zvinoshanda, pane chero komputa.
Pindura Chero ani